Sawirka koowaad ee Meizu 15 wuxuu muujinayaa laba kamarad iyo shaashad qalooca | Androidsis
Sawirka koowaad ee Meizu 15 wuxuu muujinayaa laba kamarad iyo shaashad qalooca
Maalmo kahor a Meizu M15 Plus soo bandhig, mid ka mid ah taleefannada soo socda ee soo socda ee Meizu oo leh bezels yar iyo saamiga 18: 9. Maanta bixin kale ayaa aragtay iftiinka oo sida muuqata waa nooca 'caadiga ah' ee Meizu 15.
Waxyaabaha la soo daabacay waxaa soo diray khabiirka caanka ah ee GSMArena, markaa waxaan dhihi karnaa si hubaal ah in tani ay tahay daadad dhab ah. Haddii aan u malayno inay run tahay, waxaan haysannaa Meizu 15 oo leh laba kamaradood oo taagan meel toosan (oo la mid ah Meizu 15 Plus) iyo wareeg wareeg ah oo qalinka hoostiisa ah oo u muuqda inuu yahay iftiin casri ah oo LED ah sida kan Meizu Pro 6 Plus.
Dhinaca hore ee Meizu 15 waxaan ku aragnaa shaashad qaloocsan oo labada dhinac ah iyo badhanka bilowga oo sida xaqiiqada ah sidoo kale la shaqeyn doona akhristaha sawirka faraha. Dusha kore waxaan ku aragnaa kamarad, taas oo meesha ka saareysa fikradda ah in tani ay tahay taleefan leh afar kamarad oo dejisan.
Astaamaha suurtagalka ah ee Meizu 15
In kasta oo aysan jirin wax macluumaad ah oo ku saabsan astaamaha aaladda - taas oo naga dhigaysa inaan u maleyno in soo-saaristeeda ay weli dhowr bilood naga hadhay - waxaa lagu xantaa in Meizu 15 Plus uu la imaan doono Snapdragon 845 iyo 6 ama 8 GB oo xusuusta RAM ah. waxaa laga yaabaa inuu filayo nooca caadiga ah inuu yeesho processor aad u xoog badan iyo 4-6GB oo RAM ah.
Dhinaca kaydinta waxaa xaqiiqo ah inaan heleyno 128 GB terminal, in kastoo aan sidoo kale ka fekeri karno nooc 64 GB ah. Taas ka sokow waxaan arki doonnaa batari weyn, iswaafajinta shabakadaha 5G, qalabka wax lagu beddelo ee loo yaqaan 'iris scanner' iyo nidaam hawlgal oo si buuxda wax looga beddelay si loola shaqeeyo geesaha.
Ugu dambeyntiina, labada aaladood ayaa la filayaa in la shaaciyo mararka qaarkood Febraayo, oo ku habboon calaamadda shirkadda sanad-guurada 15-sano.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu » Sawirka koowaad ee Meizu 15 wuxuu muujinayaa laba kamarad iyo shaashad qalooca
Maareeyayaasha faylka ee ugu fiican Android